नेपाली कांग्रे्रेसका केन्द्रीय सदस्य चीनकाजी श्रेष्ठलाई पितृशोक परेको छ । नेता श्रेष्ठका पिता पुण्यप्रसाद श्रेष्ठको शनिबार अपराह्न ३ बजे काठमाडौंको ओम अस्पतालमा निधन भएको हो । श्रेष्ठका चीनकाजी, धर्मेन्द्र काजीलगायत ५ छोरा छन् ।
विसं २००७ देखि नै नेपाली कांग्रेसमा सक्रिय रहेका स्व. श्रेष्ठ २०१५ सालमा भएको आमनिर्वाचनमा कांग्र्रेसका पूर्वसभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई गोरखाबाट विजयी गराउन सक्रिय भएर लागेका थिए । स्व. श्रेष्ठ नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सक्रिय रुपले सहभागी रहँदै आएका थिए ।
श्रेष्ठको निधनमा कांग्रे्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गहिरो दुःख व्यक्त गरेका छन् । “श्रेष्ठको निधनबाट नेपाली कांग्रे्रेसलाई अपूरणीय क्षति पुगेको छ र पार्टीले एक प्रेरणादायी व्यक्तित्वलाई गुमाएको छ,” सभापति देउवाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । श्रेष्ठको शनिबारै पशुपति आर्यघाटमा दाहसंस्कार गरिएको छ ।